Gịnị bụ elu borosilicate iko? Okpokoro osisi na-emebi emebi?
1. Gịnị bụ elu borosilicate iko High borosilicate iko na-mere nke elu mmepụta technology site na iji conductive àgwà nke iko na elu okpomọkụ na kpo oku n'ime iko na-aghọta iko-agbaze. Igwe elu borosilicate bụ ụdị "esiri esi", na cos ...
Ihe omuma ihe banyere karama
N'oge a, ma iko ọgwụ ma ọ bụ sodium carbonate akpa dị ka ọkọlọtọ na-adabere na ma a na-eji iko ọgwụ (1) eme ihe. 2. Igwe anaghị agba nchara ga-enwerịrị opekata mpe 13% chromium na nickel ma ọ bụ manganese. Dị ọcha nke ngwaahịa aluminom niile agaghị agafe 3% site na mas ...